Faha-40 taonan’ny FFKM Hankalazaina mandritra ny roa taona
Mankalaza ny faha-40 taona nijoroany ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Hanomboka amin’ity taona ity izany, haharitra roa taona ao anatin’ilay teny faneva manao hoe :
“Hikambana tsara hiray saina sy hevitra”. Hetsika maro sosona no entina hanamarihana izany, raha araka ny tafa nifanaovan’ny komty mpikarakara tamin’ny mpanao gazety omaly. Anisan’ireny ny fikarakarana fifaninanana hira faneva sy sary famantarana vaovao ho azy ireo izay azon’ny rehetra handraisana anjara toy ny zanaky ny fiangonana FFKM manan-talenta, ireo Kristianina…. Eo anelanelan’ny 07 jolay ka hatramin’ny 06 septambra ho avy izao no handraisana izany hiparitaka manerana ny renivohi-paritany enina. Amin’ny maha raiamandreny am-panahy ireto FFKM ireto moa dia nomarihiny omaly fa tsy manadino ny mitondra am-bavaka ny fiainam-pirenena izy ireo ka anisan’ireny ny CAN 2019 izay handraisan’ny ekipam-pirenena Barea anjara. Toraka izany koa ny mpitondra sy ny vahoaka tsy an-kanavaka.